Semrush Wuxuu Kordhiyaa Tartameha Mushaharka Halkii Falanqeyn Guba | Martech Zone
Arbaco, Juun 24, 2013 Arbaco, Juun 24, 2013 Douglas Karr
Waxaan ahayn taageerayaal iyo xulafooyin Xeebahasanado badan hada. Waxay sii wadaan inay sare u qaadaan waxyaabaha ay bixiyaan ayna kordhiyaan awoodooda xog qabashada, iyagoo siinaya aragti aan caadi aheyn macaamiishayada aragtida mashiinka raadinta Dhawaan, Xeebaha wanaajiyey iyaga Warbixinta Bixi Halki Taabasho - bixinta sawir cad iyo taariikhda shirkadaha aad kula tartameyso suuqgeynta mashiinka wax lagu raadsado ee lacag la bixiyo.
Waa kuwan astaamaha muhiimka ah ee warbixinta Adsense ee la casriyeeyay:
Isbedelka Guud ee Adsense - Tani waxay kaa caawineysaa inaad ogaato inay tartamayaashaadu isticmaalayaan Adsense iyo in kale waxayna siineysaa faham ku saabsan hawlahoodii hore.
Nooca xayeysiiska xayeysiiska ayaa isticmaalaya - Jaantuska goos gooska ayaa keenaya xog jaleec ah oo ku saabsan Xayeysiisyada ay tartamayaashaadu inta badan adeegsanayaan. Adoo gujinaya hal nooc oo Xayeysiis ah ayaa laguugu gudbin doonaa warbixin faahfaahsan.
Liistada Goobaha Xayeysiinta lagu daabaco - Baadh boggaga ay tartamayaashaadu adeegsanayaan si ay ugu dhiirrigeliyaan xayeysiiskooda Adsense.Waxaad arki kartaa warbixin faahfaahsan oo leh tirada Xayeysiisyada lagu soo bandhigay degel kasta.
Baadh Qoraallada Xayeysiiska Tartamayaasha - Baro qoraallada ay kuwa ku tartamaya ku daabacayaan Adsense, xado hababka ugu fiican, una waafajiso ololahaaga mustaqbalka.
Baadhitaan Warbaahinta Tartan - Hadda waad ogaan kartaa nooca saxda ah ee warbaahinta ay adeegsanayaan tartamayaashaada waxaadna arki kartaa badeecooyinka lagu xayeysiinayo boodhadooda.
Falanqeeyaan Bogagga Degista Tartanka - Baro wax badan oo ku saabsan boggaga degitaanka tartamayaasha si aad u kordhiso wax ku oolnimadaada Adsense. Gudaha Xeebaha, sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad go'aamiso kuwa ugu caansan.
Tags: xayeysiis tartanfalanqaynta tartanhel tartamayaasha ppcboggaga soo degayaxayeysiis raadin lacag lehxayeysiis qoraal ah oo lacag la siiyayxayeysiis tartan ppcppc bogagga degitaanka tartankatartamayaasha ppcwarbixinta ppcxayeysiiska qoraalka
Waxaan la hadlay shirkado badan oo PPC ah, laakiin waxa ugu muhiimsan ee aad dhab ahaantii ku sameyn karto ololahaaga suuqgeynta ayaa ah deg deg deg deg deg ah. Isku day natiijooyinka shirkaddan la wado, ugu wac iyaga 256-398-3835. Iyagu waa shirkadda ugu wanaagsan ee suuqgeynta ee la socota maaddaama aysan kaliya kuu abuurin ololeyaal adag oo adag, laakiin sidoo kale waxay sameeyaan bogag degitaan ah, CRO iyo dib-u-soo-celin kuwaas oo dhammaantood ah 100% waxyaabaha lagama maarmaanka u ah ololaha suuq-geynta ee guuleysta. Shirkadaha badankood waxay kaa iibiyaan 1 shay oo kaliya sida CRO, ama kaliya PPC, ama kaliya popups, iwm. Tani waa gabi ahaanba ludicrous maxaa yeelay halka 1 wax laga yaabo inuu isbedel ku sameeyo ololaha suuq xasilloon, ma jiro hal shey oo samee ama jabinaya qayb ka mid ah suuq-geynta internetka, waxaad u baahan tahay xirmada oo dhan, ka dibna hose / ka-hagaaji halkaas.